ပိုး Fibroin porous ငြမ်း - တရုတ် Simatech
ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်. , အဖြူရောင် elastic နှင့်စိမ်ငြမ်းမဆိုပုံသဏ္ဍာန် (ဆလင်ဒါ, disk ကို, တုံး, etc) နှင့်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။
ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်. , အဖြူရောင် elastic နှင့်စိမ်ငြမ်းမဆိုပုံသဏ္ဍာန် (ဆလင်ဒါ, disk ကို, တုံး, etc) နှင့်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါငြမ်းအတွက်အပြန်အလှန်ကြီးမားတဲ့အပေါက်ဆဲလ်တွေ, ပူးတွဲပွားနှင့်စသည်တို့နှင့် Vivo လေ့လာမှုများအတွက်ခွဲခြားဖို့ခွင့်ပြု, အာဟာရ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့။
အပေါက်အရွယ်အစား 100-1000 micrometer တစ်အကွာအဝေးအတွင်းကွဲပြားနိုင်ပါတယ်, Porosity: ≥ 90%
N ကို ote :
ဒီထုတ်ကုန်တစ်ခုစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုအရသိရသည် porous ငြမ်း၏စီးရီးပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ယခင်: ပိုး Fibroin ဖြေရှင်းချက်
နောက်တစ်ခု: ပိုး Fibroin Nano / Microspheres
Regenerated ပိုး Fibroin porous ငြမ်း
Regenerated ပိုး Fibroin ပရိုတိန်း porous ငြမ်း
သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးပိုးပရိုတိန်း porous ငြမ်း
ပိုး Fibroin ပရိုတိန်း porous ငြမ်း
ပိုးပရိုတိန်း porous ငြမ်း